. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: သူ့အတွေး ကိုယ့်အတွေး
လူအများ ပြည့်ကျပ်နေသော ဘတ်စ်ကား တစီးပေါ်တွင် -
အ၀တ်အစား သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်ပုံရသော အသက် ၂၀ အရွယ် မိန်းကလေးတယောက်သည် ထိုင်ခုံနေရာပေါ်တွင် ထိုင်လျှက် အသက် ၅၀ ကျော် အရွယ် ခပ်နွမ်းနွမ်းဦးလေးကြီး တယောက်သည် ထိုမိန်းကလေးရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်လျှက် လိုရာခရီးကို နှင်လျှက် ရှိကြသည် .. အသက် ၅၀ကျော်အရွယ် ဦးလေးကြီးသည် ရှေ့မှ မိန်းကလေးကို မျက်လုံးမွဲမွဲများဖြင့် ကြည့်လျှက် မိန်းကလေးကတော့ ရွံရှာစက်ဆုတ်သည့် အနေရခက်သည့် မနှစ်လိုသည့် အမူအယာမျိုးဖြင့် တည်ရှိလျှက် ရှိကြသည် .. သူတို့ နှစ်ဦး၏ စိတ်အတွေးထဲတွင် -
မိန်းကလေး - "ရှေ့က အဖိုးကြီးကလည်း သူ့အသက်အရွယ်ကိုမှ မထောက် လူကို ကြည့်နေလိုက်တာ တော်တော် နှာဘူးထတဲ့ လူကြီး .. ကိုယ်နံ့ကလည်း အလုပ်ကြမ်းလုပ်ထားတာ နံဟောင်လို့ .. !@#$%^&^%$"
ဦးလေးကြီး - "ရှေ့က မိန်းကလေး ကြည့်ရတာ ပညာတတ်ကလေး ဖြစ်မယ် .. ငါ့သမီးလေးကိုသာ ပညာသင်ပေးခွင့် ရခဲ့ရင် .... ငါ့သမီးလေးကို ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေချင်လိုက်တာ .."
သာမန်ထက် ဆင်းရဲသော ရပ်ကွက်ကလေး တခုတွင် -
၀ါးလုံးခင်း ထန်းလက်မိုးများဖြင့် နေကွယ်ရုံ လူတယောက် ကျောတချစာနေရာတွင် ဖွင့်ထားသော လက်သုပ်စုံ ဆိုင်လေးတဆိုင် ရှိသည် .. ဆိုင်ရှင် အဒေါ်ကြီးကို ရပ်ကွက်မှ လူအများစုက ချစ်ခင်ကြသည် .. အကြောင်းမှာ လက်သုပ်ရောင်းရာတွင် စေတနာပါပါနှင့် လက်ဖွာတတ်သောကြောင့်တည်း .. လက်ဖွာတတ်သဖြင့် ဆိုင်ပိတ်ချိန်မတိုင်မီပင် သူမ၏ အသုပ်များ ကုန်လေ့ရှိသည် .. ငွေအိတ်ကတော့ ထူးမခြားနားပင် .. တနေ့လုပ် တနေ့စား ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ဖြစ်သဖြင့် ညနေစာကို အသုပ်လေးနှင့် အကြော်လေးနှင့် ပြီးရတတ်သော လူတန်းစားများပေ .. အသုပ်ဆိုင်တွင် အမျိုးသမီးတယောက် အသုပ်မှာနေသည် .. မှာရင်း သုပ်ရင်းလည်း ထိုအမျိုးသမီးမှ လိုချင်သည်များကို ထပ်ထပ် ထည့်ခိုင်းနေသေးသည် .. ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးကတော့ ပြုံးပြုံးနှင့်ပင် တတ်နိုင်သလောက် ထပ်ထည့်ပေး သုပ်ပေးနေသည် .. ၀ယ်သူ ဆိုင်ထဲမှ အထွက် သူတို့ အတွေးထဲတွင် -
ဆိုင်ရှင် - "မ---- တို့ မိသားစုတော့ ဒီနေ့ ငါ့အသုပ်နဲ့ ညစာပြီးမှာပါပဲ .. ၂ပွဲစာ ကျော်ကျော်လောက်ကို သုပ်ပေးလိုက်ရတာ .. အင်းလေ သူတို့ မိသားစုက များတော့ ဒီလောက်မှပဲ အဆင်ပြေလိမ့်မပေါ့ .. ၂ပွဲစာဖိုး ပိုက်ဆံမရပေမယ့် ကုသိုလ်တော့ ရလိုက်ပြီ .. မလှူတတ်ရင် ဈေးရောင်းတဲ့ .. မ---- တို့ မိသားစု ထမင်းစား မြိန်ပါစေ .. ဒီနေ့လည်း ငါ့အသုပ်တွေက ကုန်တာပါပဲ .. ဒီ ၃ ၄ ပွဲဆို ကုန်ပြီ .. အိမ်ပဲ ပြန်သယ်သွားရ ကောင်းမလား .. "
ဈေးဝယ် - "ဒေါ်ထုံကြီးကတော့ နာမည်ပေးခံရတာတောင် နည်းသေးတယ် .. ဟိုဟာပြော ဒီဟာပြောနဲ့ ထည့်ခိုင်းလိုက်တာ ၂ပွဲစာတောင် မကဘူး .. သဘောကောင်းတယ် နာမည်လိုချင်တာ ခံလေ .. ဟင်းဟင်း .. ဒီကလည်း စားချင်လို့ ၀ယ်ရတာ မဟုတ်ဘူး .. အိမ်ကလူ ဒီနေ့ အလုပ်မကောင်းလို့ ဒီကြားထဲ ငါ့'ကံ'လေးကလည်း စွပ်တယ် .. ၂လုံးထီထိုးတာ ၂လုံးလုံးလွဲ .. ဆန်ဖိုးလေးများရမလားလို့ ကံစမ်းပါတယ် .. ရှိတာလေးပါ ပါသွားတယ် .. အေးလေ ဒီနေ့မရ နောက်နေ့ပေါ့ .."
ကျမ တခါတလေ လူတွေကြားထဲနေရင်း သူတို့ရဲ့ ပြုမူ ပြောဆိုပုံတွေ လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ရင်း မြင်ရင်း အတွေးတွေလည်း စုံလို့ပဲ ရတတ်ပါတယ် .. အဲဒီ အတွေးတွေနဲ့ မြင်ဘူး တွေ့ဘူးတာလေးတွေ စိတ်ကူးပေါက်ရာလေးတွေ ချရေးလိုက်မိတာပါ .. အပေါ်က ဖြစ်ရပ်မျိုး ခပ်ဆင်ဆင်ကိုတော့ စာတပုဒ် (သို့) ရုပ်ပြတခုခုမှာ ဖတ်ဘူးသလို ရှိတာကို ပြန်တွေးပြီး ရေးလိုက်တာပါ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 11/18/2010 11:47:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ဘ၀, ဟိုရောက် ဒီရောက်, အတွေး စိတ်ကူး